Firarian-tsoan'ny Pôetawebs 2018
Izahay mpiaraka mifarimbona eto amin'ny Pôetawebs dia maneho fisaorana ny mpisera rehetra tamin'ny fiaraha-miasa nandritra ity taona 2017 ity ho fanandratana ny tontolon'ny poezia malagasy ary maneho izao rary izao ho an'ny taona 2018:
"Mirary soa sy fanambinana ho antsika mpanaraka ny tranonkala dia hitondra fahombiazana ho antsika anie ity taona vaovao ity".
"Amin'ny taona 2018 io, enga anie ny mpanjohy ny Pôetawebs sy ny vahoaka Malagasy manerana izao tontolo izao mba hitobahan'ny tahiry sarobidy, hibosesehan'ny soa safononoka, hifafazan'ny fy amin'ny fiainana, hikarenjen'ny kanto mikararàna".
"Mbola hiaraka hifanjohy hatrany ho fampandrosoana ny tontolon'ny pôezia isika amin'ity taona ity".
"Ho enin-tsoa anie isika rehetra mandritra ny taona 2018 eo am-panovozana ny kanto apariaka ato amin'ny Tranonkala Pôetawebs".
"Ho ampoky ny mamy,
ho tototry ny soa,
ho sambatra aoka izany,
"Ity taona 2018 ity anie ho vonin-dohataona feno nofy hamololona, ho ravim-pahavaratra ampoka asa fihavaozana, ho tahom-pararano hahato ny kinasa, ho fakan-dririnina hitahiry ny tena aina, mba ho fahombiazana sy taona fenomanana!"
"Hanana ny lanjany ary ho fanoitra velona hampandroso ny fiaraha-monina anie ny tontolon'ny teny sy ny poezia amin'ity 2018 ity, hoy ny tranonkalanao Pôetawebs!"
"Miarahaba ny mpanaraka ny Pôetawebs rehetra nahatratra an'ity taona vaovao 2018 ity. Ho heniky ny soa hatrany ary mirary ny rehetra hahatafita soa ny tanjona irina, indrindra eo amin'ny fanandratana ny kolontsaina."